Harry Kane Oo Kulan La Yeeshay SADDEX Ciyaartoy Oo Edeb-darro Sameeyey Ka Hor Intii Aan Laga Caydhin Xulka Qaranka England - Gool24.Net
Harry Kane Oo Kulan La Yeeshay SADDEX Ciyaartoy Oo Edeb-darro Sameeyey Ka Hor Intii Aan Laga Caydhin Xulka Qaranka England
Harry Kane ayaa kulan la qaatay saddex ciyaartoy oo uu siiyey digniin la xidhiidha dhaqan-xumo ay sameeyeen oo xulka qaranka England usoo jiidi karaysa in uu ka dhex dillaaco xanuunka Korona Fayras.
Tammy Abraham, Ben Chilwell iyo Jadon Sancho ayaa la sheegay inay jabiyeen qawaaniinta loo dejiyey xakamaynta xanuunka Korona Fayras oo ay ka qayb-galeen xaflad xilli ay ka mid yihiin laacibiinta xulka qaranka England ee uu tababare Gareth Southgate u diyaarsanayo kulamada UEFA Nations League iyo saaxiibtinimo ee usbuuc-dhamaadkan iyo toddobaadka dambe.
England oo hore looga saaray Mason Greenwood iyo Phil Foden oo bishii hore hotel kula kulmay laba gabdhood xilli ay ku sugnaayeen waddanka Iceland ayaa waxa haddana soo baxay muuqaal uu duubay Abraham oo qabsaday xaflad uu ugu dabbaal-degayo dhalashadiisa 23aad, taas oo ay kasoo qayb-galeen illaa 15 qof.
Arrintan oo meel ka dhac ku ah sharciga dawladda UK u dejisay xakamaynta xanuunka oo mamnuucaya in wax ka badan lix qof ay meel iskugu yimaaddaan, ayaa waxay keentay in tababare Southgate uu lumiyo kalsoonidii uu ku qabay.
Harry Kane ayaa dhinaciisa kulan ula yeeshay saddexdan ciyaartoy, waxaana uu u sheegay inay tusaale noqdaan oo ay ka digtoonaadaan waxyaabaha ay sameeyeen in mar kale ay ku kacaan.
“Waxa uu ahaa kulan caadi ah oo kaliya tababare Gareth aanu ka hadal ee laakiin ay dhamaan ciyaartoydu hadleen si ay u xaqiijiyeen inay isku boos taagan yihiin.” Sidaa waxa yidhi Harvey Barnes oo ka sheekaynayay kulankii Harry Kane hoggaaminayay ee ciyaartoydu la yeesheen saddexdan laacib.
“Waxa aanu ogsoonahay masuuliyadda na saaran waqtigan, ciyaartooyo ahaanna waa inaanu ogaano in indhaha bulshadu na hayaan. Waa inaanu gunado masuuliyaddayada , ficillada aanu samaynaynaana ay noqdaan kuwo cid waliba xasuusnaanayso, in aanu hubino inaanu jidka tooskan ku suganahay gudaha iyo bannaanka garoonkaba.” Ayuu ku daray.
Dominic Calvert-Lewin oo isaguna hadlay ayaa yidhi: “Dhamaantayo waxa aanu fahamsanahay qiimaha ay leedahay in loo ciyaaro waddanka, waana inaad mar walba taas xasuusnaataan. Waa inaad si dheeraad ah u taxadartaan oo aad shuruucda raacaan.”
Saddexdan ciyaartoy ayaa laga saaray liiska xulka qaranka England ee kulanka saaxiibtinimo ee Khamiista ay England la ciyaarayso Wales, waxaana lagu samayn doonaa baadhitaano lagu hubinayo badqabkooda ka hor inta aan loo ogolaan kusoo laabtaan xulkooda waajahaya Denmark iyo Belgium usbuuca dambe.
No for sancho
Nagiib ibraahim xassan maxamed rooble says:
Hargysa pipsiga macalin daauud fasalka 8aad